Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 68
Banaan baxyo ka dhan ah Guusha Donald oo ka soconaya dalka Maraykanka.
Muwaadiniin badan oo Ameerikaan ah ayaa si aad ah uga soo horjeeda guusha lama filaanka ah ee uu gaaray Donalad Trump, islamarkaana ku guulaystay inuu noqdo madaxweynaha Maraykanka afara sano ee soo socota. Dadka Banaan baxaya oo u badan Taageeriyaasha Xisbiga Dimuqraadiga dalka Maraykanka ee laga guuleystay ayaa isugu soo baxay ugu yaraan todobo magaalo oo ku kala yaala gobollo ...	Read More »
Yahuudda oo si kal iyo laab ah usoo dhaweeyay madaxweynaha Cusub ee Maraykanka.
Iyadoo cod bixintii maalintii shalay ka dhacday gobollada dalka Maraykanka ay Ameerikaanku ku doorteen in Donald Trump noqdo madaxweynaha sanadaha soo socoda maamuli doona Aqalka Cad ayaa waxaa arinkaas aad ugu farxay maamulka Yahuudda. Siyaasadaha gurracan ee uusan qarsan kana dhan ah Muslimiinta ayay maamulka Yahuuddu u arkaan iney tahay fursad soo martay oo ay ku burburin karaan inta hartay ...	Read More »
DEG-DEG:Donald Trump oo noqday madaxweynaha Maraykanka.!!!
kadib Saacado xiriir ah oo dadka Maraykanku u codeynayeen cida noqon doonta madaxweynaha dalka Maraykanka Afarta sano ee soo socota ayay si buuxda u doorteen inuu dalkaas ka taliyo ninka lagu magacaabo Donald Trump oo kaga duwan madaxda Maraykanka inuu banaanka soo dhigo cadaawada uu u qabo Muslimiinta. Hellary Clinton oo la tartameysay Donald ayaa guul daro qaraar dhabarka loo ...	Read More »
Cod bixinta doorashooyinka dalka Maraykanka ee lagu dooranayo madaxweyne cusub oo uu yeesho dalkaas ayaa si adag uga socota gobollada kala duwan ee dalkaas, waxaana la helayaa Natiijooyin horudhac ah oo muujinaya codadka la kala haysto. Hellry Clinton oo u tartameysa xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku guulaystay codadka 15 gobol oo uu ku jiro gobolka Washighton oo uu ku yaalo magaala ...	Read More »
Doorashada Maraykanka oo lagu wado in maanta loo dareero.
Waxaa maanta oo Talaado ah gobollada dalka Maraykanka ka bilaaban doona cod bixinta ay sameynayaan dadka Maraykanka ah si ay u doortaan qofka maamulaya Aqalka looga taliyo shacabka Maraykanka afarta sano ee soo socota. Gobollada kala duwan ee dalka Maraykanka ayaa lagu wadaa in doorashadu si buuxda uga dhacdo, waxaaana Ameerikaanku isku diyaarinayaan iney ukala codeeyaan Afar musharax oo ay ...	Read More »
Iyadoo dhawaan dalka Lubnaan lagu doortay madaxweyne cusub oo Kirishtaan ah kaas oo ay yeelato xukuumadda Lubnaan ayaa waxaa maamulada tallaabadaas sida aadka ah ugu farxay kamida h maamulka Bashaar Al-Asad ee ka jira dalka Suuriya. Madaxweynaha Nidaamka Nusyariyga Bashaar ayaa wafdi kasocoda dowladiisa u diray magaalada Bayruut caasimadda dalka Lubnaan, kuwaas oo wada fariin hambalyo ah oo kasocota Bashaar ...	Read More »
Dagaallo ka dhacay gobolka Al-Baydaa ee dalka Yaman.
Saacadihii lasoo dhaafay waxaa dagaallo xoogan ay ka dhaceen gobolka Al-Baydaa ee dalka Yaman, kuwaas oo dhexmaray ciidamo katirsan kuwa Qabaa’ilka iyo malleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo taageero ka helaya kuwa Cali Cabdalla Saalax madaxweynihii hore ee dalkaas. Dagaallada oo ahaa kuwa xoogan islamarkaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa wararka nasoo gaaraya waxay tibaaxayaan in khasaare lagu gaarsiiyay malleeshiyaadka ...	Read More »
Saraakiishii Maraykanka ahaa ee lagu dilay Urdun oo la geeyay dalkooda.
Iyadoo maalintii Jimcaha dalka Urdun lagu dilay Saddex Sarkaal oo Tababarayaal ahaa kana soo jeeda dalka Maraykanka ayaa waxaa maydadka Saraakiishaas la geeyay dalka Maraykanka. Saraakiishan ayaa lagu dilay saldhiga Al-Faysal oo ah saldhig lagu tababaro Ciidamada Urdun, waxaana dilkooda kasoo baxay warar kala duwan oo is khilaafsan. Warbaahinta Urdun ayaa sheegay in Saraakiisha la dilay uu rasaas ku furay ...	Read More »
Kamiin ka dhacay dalka Maraykanka oo lagu dilay Askar Booliis.
Wararka ka imaanaya dalka Maraykanka ayaa ku waramaya in weeraro kamiin oo waqtiyo kala duwan dhacay lagu dilay Ciidamo katirsan Booliiska dalka Maraykanka. Sida uu sheegay Tvga NBC news waxaa magaalada Des Moines ee gobolka Lowa lagu dilay labo Sarkaal oo katirsanaa Boooliiska kadib markii iyagoo ku guda jira shaqadooda jidka loo galay. Maydadka labadan Sarkaal ayaa muda kadib waxa ...	Read More »
Weerar khasaare dhaliyay oo ka dhacay dalka Canada.
Wararka ka imaanaya dalka Canada ayaa sheegaya in weerar hubeysan lagu qaaday Iskuul ku yaala magaalo lagu magacaabo IbwatisFord, Halkaas oo khasaare uu ka dhashay. Sida ay sheegeen Saraakiisha Booliiska waxaa weerarka oo uu fuliyay ruux ku hubeysnaa Mindi uu ka dhashay dhimashada gabar kamid ahayd Ardeyda Iskuulka iyo dhaawaca mid kale kale, waxaana ruuxa weerarka fuliyay gacanta ku dhigay ...	Read More »